ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အခမဲ့ရထားဒီနွေရာသီ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အခမဲ့ရထားဒီနွေရာသီ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 18/09/2020)
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အထိအခမဲ့ရထားရှိလိမ့်မည် 30,000 ဆယ်ကျော်သက် ဒီနွေရာသီ. အခမဲ့လက်မှတ်တွေအရေအတွက်ပင်ဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်. တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ. အီးယူဒါ့အပြင်ကြောင့်အသက်ဆယ်ကျော်သက်ဖို့ကမျးလှမျးခကျြမရရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည် 18 နှင့်အငယ်. အခမဲ့ရထားလက်မှတ်တွေ၏နံပါတ်ကြောင့်, အီးယူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ကျော်လွန်စေခြင်းငှါ 12 သန်းပေါင်.
တွင် 1972 မီးရထားဘူတာ ဥရောပတိုက်တွင်နွေရာသီအတွက်လူငယ်များနှင့်ပြည့်ကြ၏. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဤအချိန်တွင်နေဆဲအလွန်စျေးကြီးခဲ့ကြသည်, $38 ဥရောပတစ်လွှားရထားဖြတ်သန်းဘို့ဆွဲဆောင်မှုသလိုပဲ. ထို့အပြင်, ညဥ့်ရထားကြောင်းလုပ် နေရာထိုင်ခင်းသည်အလွန်တတ်နိုင်ခဲ့. လည်း, ရထား 'passes အပေါငျးတို့သပါဝင်သည် အနောက်ဥရောပ. တွင် 1998 ထို့နောက်သည်အထိအောက်မှာကလူသာမရရှိနိုင်ခဲ့ကြရသောရထား 'passes 26 အသက်ကန့်သတ်ဖယ်ရှားခဲ့သည်. Interrailing ဒါကျော်ကြားခဲ့သည်, နှင့်နိုင်ငံများကသူတို့၏ရထားဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ခရီးသွား for ည့်များအတွက်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်းများကိုစတင်ဖော်ပြခဲ့သည်. ထို့အပွငျ, စျေးနှုန်းချိုသာလေယာဉ်ခရီးစဉ်ထို့နောက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ထွက်ခွာရရှိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည် interrailing ဥရောပခရီးတစ်ခုစျေးကြီးပြီးထိရောက်မှုလမ်းအဖြစ်. ယခုဥရောပပါလီမန်သည် interrailing ကိုဆယ်ကျော်သက်များအတွက်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်အုပ်စိုးရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည် 12 စီမံကိန်းအတွက်သန်းပေါင်.
အခမဲ့လက်မှတ်တွေထဲကတစ်ခုလျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်, သင်မှသင်၏လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ် ဥရောပလူငယ် Portal ကို ဇူလိုင်လထဲမှာ. တစ်ဦးကဂျူရီပြီးတော့ခွဲဝေချထားပေးရန်ပါလိမ့်မယ် 15,000 အခမဲ့ရထားလက်မှတ်တွေ. ၏ဒုတိယ set ကိုစဉ်တွင် 15,000 လက်မှတ်တွေကနောက်ဆုံးမှာပါလိမ့်မည်စီစဉ်ထားခဲ့ပြီး ဘတ်ဂျက်အပေါ်မှီခို နှင့်ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်တုံ့ပြန်ချက် 15,000 သင်တန်းသားများကို. တင်ပြဘို့အတိအကျရက်စွဲများဇွန်လ 12 နှင့်ဇွန်လများအကြားဖြစ်လိမ့်မည် 26. သငျသညျဖွစျလိမျ့မညျဆိုပါကသင်ကလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီ 18 ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင်အသက်. 1900 လက်မှတ်တွေကိုဗြိတိသျှလျှောက်ထားရန်ခွဲဝေလိမ့်မည်, ဤအခမဲ့ရထား၏. ထိုနည်းတူ, ပြင်သစ် နှင့် ဂျာမနီ will also receive 1900 လက်မှတ်တွေ. မတူတာကတော့, အိုင်းရစ်လျှောက်ထားမှသာလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ် 140 လက်မှတ်တွေ.
အကောင်းဆုံး Applications ကို
အခမဲ့ရထားများအတွက်အကောင်းဆုံး applications များအကြားစဉ်းစားနိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါသရုပ်ပြရန်လိုအပ်ပါတယ်;
ပထမဦးစွာ, အနည်းဆုံးဥရောပယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုသို့လည်ပတ်ရန်သင့်စိတ်အားထက်သန်မှု. ထို့အပြင်, သငျသညျဥရောပယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် site ကိုပတ်သတ်ပြီးပဟေဠိဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဉာဏ်စမ်းပဟေyouthိများတွင်လူငယ်များနှင့်ဥရောပပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများလည်းပါ ၀ င်သည်.
ထို့အပွငျ, သင်တစ်ဦးဖြစ်လာမယ့်အလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် DiscoverEU သံအမတ်ကြီး. ဒီအလိုဆန္ဒသင့်ရဲ့အစီရင်ခံပါဝင်သည်သင့်တယ် အတွေ့အကြုံများခရီးသွားလာ နှင့် သင်၏ဓါတ်ပုံများအောင် available to DiscoverEU anniversary photo exhibition at the European Parliament.
သငျသညျအခမဲ့ရထားလက်မှတ်တွေမရခဲ့ပါဘူးလျှင်ဒါငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရှာနေကြသည်ကိုသိသောကြောင့်, ကျွန်တော်ရှာတွေ့မယ့်အစာရှောင်ခြင်း search engine ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြ စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေ လျင်မြန်စွာ. အကြှနျုပျတို့သညျကိုပိုပြီးသွားလာနှင့်လျော့နည်းပေးဆောင်ချင်. Credit Card ကိုအပါအဝင်မျိုးစုံငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသုံးပြီးမီးရထားလက်မှတ်များဝယ်ယူ, PayPal က, and Alipay. Whether you are looking for လှပသောရှုခင်း, ကောင်းသောအစာအာဟာရ, ရင်ခုန်စရာခရီး ဥရောပမှသွားလာသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်, ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးလက်မှတ်နှင့်အတူသငျသညျပေးနိုငျ.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffree-trains-summer-teens%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#အခမဲ့ #freetrains မီးရထားလက်မှတ် ရထားအကြံပေးချက်များ